Saturday November 21, 2020 - 09:05:09 in News by Hadhwanaag News
Qaadashada tallaal ay wehliso daweyn waa waddada ugu wanaagsan oo "cudurka looga badbaadi karo".
Tijaabada tallaalka ay sameysay Jaamacadda Oxford ayaa lagu ogaaday inuu difaac adag uu usameeyo dadka da'da ah ee lagu tijaabiyey.
Dalka UK goobaha loo saadaaliyey iney noqon karaan kuwa ahmiyadda ugu horreeyo la siiyo ayaa lagu sheegay xaruumaha dadka waayeelka ah lagu xannaaneeyo oo dalkaasi ku yaalla, waxaana ku xigi doona xirfadlayaasha caafimaadka iyo dadka ay da'doodu tahay 80 jirrada.
Khatarta ilaa iyo hadda ugu weyn ee Covid-19 waa da'da.
Hay'adaha u xilsaaran oo tijaabooyinka la sameyey ansixiya inta aan tallaalkaasi isticmaalkiisa la billaabin ka hor
Balse tijaabooyin horay loo sameeyey iyo taariikhda soo jireenka ee dhanka tijaabooyinka dawadaba waxaa lagu ogaaday tallaalka dadka da'da ah la siiyo inuu sidi la rabay u shaqeynin maadaamaa awoodda difaaca jirka qofka da'da ah ay da'diisu daciifisay. Balse cilmi baarayaashu waxay xaqiijiyeen arrintan iney dhib ku ahayn tallaallada haatan la tijaabiyey ee Faayrasaka Corona.